मादुरोलाई जोगाउन रुसी सेना भेनेजुएलामा ! « Khabarhub
मादुरोलाई जोगाउन रुसी सेना भेनेजुएलामा !
भेनेजुएला– राजनीतिक संकटसँग जुधिरहेको भेनेजुएलामा रुसले सैनिक पठाएको छ । भेनेजुएलाको राजधानी कराकासमा रहेको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा रुसको इल्युशिन आईएल ६२ विमानमार्फत् १ सय जनाभन्दा धेरै रुसी सैनिक आएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् । त्यस्तै रुसले अर्को एन्टोनोभ एन १२४ कार्गो विमानमार्फत् ३५ टनको सैनिक उपकरण भेनेजुएला पठाइएको छ ।
रुसी सैनिक जनरल भासिली टोङ्कोश्किुरोभको नेतृत्वमा सेना कराकासमा उत्रिएको बताइएको छ । रुसले भेनेजुएलासँग भएको सैनिक सम्झौता पूरा गर्नका लागि सैनिक तथा सैनिक उपकरण पठाइएको रुसको स्पुत्निक समाचार संस्थाले जनाएको छ ।
दुई मुलुकले संयुक्त सैन्य अभ्यास गरेको ३ महिनापछि रुसले भेनेजुएलामा सेना पठाएको हो । गत डिसेम्बर महिनामा रुसले आणविक बम बोक्नसक्ने दुई टुपोलेभ टीयू १६० रणनीतिक बमवर्षक विमान पठाएर भेनेजुएलाको सेनासँग संयुक्त सैन्य अभ्यास गरेको थियो ।
रुस र भेनेजुएलाबीचको सम्बन्ध सुमधुर बन्दै गएजस्तो देखिएका बेला रुसले त्यहाँ सेना पठाएका विषयलाई महत्वका साथ हेरिएको छ । पछिल्लो समय अमेरिकाले भेनेजुएलाका विपक्षी नेता हुआँ गुआइदोलाई अन्तरिम राष्ट्रपतिको मान्यता दिएपछि निकोलस मादुरोको नेतृत्वमा रहेका भेनेजुएला सरकार रुसतर्फ नजिकिँदै गएको छ ।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले भेनेजुएलामा मादुरोको सरकारलाई च्युत गर्नका लागि सैनिक कारवाहीको विकल्प पनि खुला रहेको बताउँदै आएका छन् ।
लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई स्थापना गर्न भन्दै त्यहाँ सत्ता परिवर्तनलाई जोड दिइरहेका अमेरिकासहित पश्चिमा मुलुकले भेनेजुएलामाथि नाकाबन्दी लगाइरहेका बेला रुसले भेनेजुएलालाई आर्थिक तथा सैनिक सहयोग गर्दै आएको छ ।
रुसले भेनेजुएलामा सेना र सैनिक उपकरण पठाउनुलाई रुसले दक्षिण अमेरिकामा अमेरिकाको रणनीतिक सीमालाई जाँचिरहेको रुपमा अथ्र्याइएको छ । रुसले भेनेजुएलामा सेना पठाएपछि अमेरिकाले यसबारे चाँडै ठूलोस्तरको रणनीतिक प्रतिक्रिया दिनसक्ने बताइन्छ ।
यसअघि सिरियाली राष्ट्रपति बसर अल असदविरुद्ध सशस्त्र विपक्षीले सत्ता नै परिवर्तन गर्न लागेपछि रुसले आफ्ना सैनिक सिरियामा तैनाथ गरेको थियाे । रुसले विपक्षीविरुद्ध सैन्य कारबाही थालेपछि असदको सत्ता टिकेको थियो । अहिले पनि भेनेजुएला प्रकरणमा रुसी सेना पठाइएसँगै विभिन्न अड्कलबाजी शुरु भएका छन् ।
प्रकाशित मिति : ११ चैत्र २०७५, सोमबार ७ : १९ बजे